ကုမ္ပဏီဝန်​ထမ်းလား freelancer လား – For her myanmar
ကုမ္ပဏီဝန်​ထမ်းလား freelancer လား
Posted on January 12, 2018 Author Miko	Comment(0)
Freelancer လုပ်တာလို့ ပြောလိုက်ရင် ဘာလဲအဲ့ဒါ အချိန်ပိုင်းလားဆိုတာမျိုး ပြန်မေးတတ်ကြတာများပါတယ်။ တကယ်တော့…
အခု​နောက်​ပိုင်းလူငယ်​​တွေကြားမှာ​ခေတ်​စားလာတာက freelancer ဆိုတဲ့စကားလုံးပါ။ ​ပြောရရင်​​တော့ အလွတ်​တမ်းအလုပ်​သမား​ပေါ့ ( အက်​မင်​က​တော့ အဲ့လိုပဲဘာသာပြန်​လိုက်​တယ်​ 😛 ) ။ ​သူငယ်​ချင်း​တွေကြားမှာ ကုမ္ပဏီဝန်​ထမ်းလုပ်​သူနဲ့ freelancer သမား ဘယ်​သူက ပိုသာတယ်​ ဘာ​တွေဖြစ်​တယ်​ ငြင်း​လေ့ရှိတာမို့ အားသာချက်​ အားနည်းချက်​​တွေကို သိသ​လောက်​ ​ဝေမျှလိုက်​ပါတယ်​။ အသိ​တွေထဲမှာလည်း freelancer ပဲလုပ်​ချင်​တယ်​။ ဘယ်​ကစရမလဲမသိဘူးဆိုတာ​တွေ ​လာလာ​မေး​နေကြတာမို့ ဒီက​နေပဲ​ပြောပြလိုက်​မယ်​​နော်​။
Freelancer သမားဖြစ်​ဖို့လွယ်​သလားဆို​တော့ မလွယ်​ပါဘူး။ ကိုယ်​တိုင်​ကအရည်​အချင်းပြည့်မီ​နေဖို့လိုပါတယ်​။ ဥပမာ content writer ဆိုပါ​တော့ စာ​ရေးမယ်​ဆိုကတည်းက သူများကိုစွဲ​ဆောင်​နိုင်​တဲ့အ​ရေးအသားရှိရမယ်​။ စိတ်​ကူးဥာဏ်​ဆန်းသစ်​ရမယ်​။ ဒီလိုပဲ ဓာတ်​ပုံဆရာ​တွေ ဘာသာပြန်​သူ​တွေလဲ အတူတူပါပဲ။ ပြီးရင်​​​ပေါင်းသင်းဆက်​ဆံ​ရေး​ကောင်းရမယ်​။ လူတိုင်းနဲ့မိတ်​ဖွဲ့နိုင်​ရမယ်​။ ဒါမှ ကိုယ်​ကဘယ်​နား​တော့အလုပ်​လို​နေပြီသိမှာဖြစ်​သလို တစ်​ခါတစ်​​လေကျ ကိုယ်​တိုင်​ကလိုက်​​ကြေညာရတာမျိုးလဲ လုပ်​တတ်​ရပါတယ်​။ အားသာချက်​က ဘယ်​အထက်​လူကြီးကိုမှ ဖား​နေစရာမလိုသလို ဘယ်​သူ့ကိုမှ မနာလိုဖြစ်​စရာမလို​တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင်​ နယ်​ပယ်​ပိုစုံ​လေ ကိုယ်​ကလူ​ပေါင်းဆန့်​​လေပါပဲ။ အဲအသက်​ကြီးလာရင်​​တော့ အတည်​တကျဖြစ်​ဖို့ ကိုယ်​ပိုင်​လိုင်းတစ်​ခု​တော့ ရှိဖို့လိုတာ​ပေါ့​လေ။
ကုမ္ပဏီဝန်​ထမ်းကျ​တော့တစ်​မျိုး​ပေါ့​နော်​။ ဆန်းသစ်​တဲ့အကြံဥာဏ်​မျိုးထုတ်​ချင်မှလည်း ထုတ်​ရမယ်​။ ကိုယ့်​အလုပ်​က​ကျောရိုးရှိပြီးသားအလုပ်​ကို ဆက်​လုပ်​ရတာမျိုးလဲ ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ လုပ်​ငန်းကကြီး​လေ ဝင်​ဆံ့ရတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကကြီး​လေဖြစ်​ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမဲ့ ဒီအရာ​တွေက ​ယောင်းအလုပ်​ပြုတ်​သွားတာနဲ့ ပါလာမှာမဟုတ်​ပါဘူး။ ကုမ္ပဏီတစ်​ခုမှာ ​ရေရှည်​လုပ်​တဲ့အခါ ရာထူးတက်​မယ်​။ တည်​ငြိမ်​တဲ့​နေရာတစ်​ခုမှာ ​ဂုဏ်​ပုဒ်​တစ်​ခုနဲ့ရပ်​တည်​နိုင်​မယ်​။ လူ​ရှေ့သူ​ရှေ့ ဘယ်​ကုမ္ပဏီက ဘယ်​သူပါဆိုပြီး ​ပြောနိုင်​မယ်​​ပေါ့​လေ။ အထက်​​အောက်​ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်ှး​တွေခြားလာပြီး ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်​ချက်​က သက်​​ရောက်​မှုအကြီးကြီး ဖြစ်​နိုင်​တာ​တွေလဲ သတိပြုရမှာပါ။ ကုမ္ပဏီဝန်​ထမ်း​တွေက freelancer သမား​တွေထက်​ အလုပ်​ရှာရလဲ ပိုလွယ်​ပါတယ်​။
ကဲ အမှန်​​တော့ အ​သေးစိတ်​ရင်​ အများကြီးရှိ​ပေမယ့် ပျင်းမှာစိုးလို့ မ​ပြော​တော့ဘူး​နော်​။ ​ယောင်းတို့​ကော freelancer လုပ်​မှာလား ဝန်​ထမ်းလုပ်​မှာလား….
Posted on June 26, 2019 June 26, 2019 Author Aye Mon Kyaw
Posted on September 18, 2017 September 18, 2017 Author Wai Zin
Lဆိုင်းဇီရဲ့ “ဝေခွဲမရပါလား” သီချင်းကိုပဲ အော်ဆိုပစ်လိုက်ချင်စရာပါပဲ…
အလုပ်ခွင်မှာ စနစ်တကျဖြစ်ရင် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာ သိထားပြီးပြီလား?
Posted on May 30, 2018 July 8, 2019 Author Sugar Cane
စနစ်ကျတယ်ဆိုတာ ပြောတာက လွယ်သလို တကယ်ရော လုပ်ဖြစ်ရဲ့လား?
တူ တူမလေးတွေရှိသူတွေဆို သိနိုင်မယ့်အချက်များ